Amaxabiso aphezulu eselfowuni | Gcina NGOKU kwityala lakho | Iindaba zeGajethi
Amaxabiso aphezulu eselfowuni afumaneka kwimarike
Kungekude kudala, nawuphi na umsebenzisi wesixhobo esiphathwayo unokukhetha phakathi kweerhafu ezimbalwa ezihambayo, ethi kwiimeko ezininzi zifane kakhulu kwaye kufuneka sihlawule isixa esikhulu semali. Ngethamsanqa, yonke into itshintshe kakhulu ngokuhamba kwexesha kwaye namhlanje inani elisebenzayo labasebenza ngokuhamba ngeenyawo likho kwimarike esibonelela ngexabiso elikhulu leerhafu. Ezinye zitshiphu kakhulu, ezinomahluko omkhulu phakathi kwazo kunye namaxabiso ahlukeneyo. Ukwenza oku namhlanje siza kwenza uthelekiso olunomdla phakathi kwabo bonke. Njengoko kunzima ukuqala kwenye indawo, siza kuyenza ngokujonga amaxabiso aphezulu amathathu esinokuwaqesha ngoku:
Ixabiso eliphantsi: I-8GB yesimyo nge-5 Euro
Elona zinga lipheleleyo: I-15GB kunye ne-Virgin Telco engenamkhawulo nge-9 kuphela
Elona nqanaba liphezulu leselula: I-25GB kunye nomsebenzi ongapheliyo we-euro 14,90 kuphela
Kwilizwe lethu kusekho abaqhubi abathathu abakhulu abanjengoMovistar, uVodafone kunye no-Orenji, olandelwa mgama ngulowo sele enesidanga esinjengeMásMóvil (khumbula ukuba ifumene iYoigo ukuze ibonelele ngokubaluleka) kunye neVirgin Telco yakutshanje exhaswa kuyo. ungenelelo lukazwelonke liqela le-Euskaltel. Ngokujikeleze ezi sinazo ezibizwa ngokuba zii-virtual operators ezisinika umdla kunye namaxabiso aphantsi.
Rate Yenza eyakho ireyithi 10GB Simyo 10GB € 6 / ngenyanga
Inqanaba le-14.95 Amena 20GB kwaye mda. € 14.95 / ngenyanga
Ireyithi kunye ne-8GB iminxeba engenamda kunye ne-8GB € 8.90 / ngenyanga
Ireyithi yeSinFin idatha engenamda kunye neefowuni ezingenamda € 35 / ngenyanga
Ixabiso eliphezulu leorenji Idatha engenamkhawulo kunye neefowuni ezingenamda € 35.95 / ngenyanga
Ukuba ucinga ukutshintsha abaqhubi okanye ukutshintsha amaxabiso, hlala nathi kuba Kweli nqaku siza kukubonisa ezona zexabiso ziphantsi kwaye ezingabizi kangako ngamaxabiso eselfowuni afumaneka kwimarike.
Okwangoku amaxabiso eselfowuni Yoigo Zezinye zezona zinomtsalane kwimarike, ikakhulu ngenxa yenani elikhulu le-GB ababonelela ngalo kubasebenzisi, ngamaxabiso asezantsi. Ngakumbi nangakumbi abasebenzisi bakhangela inethiwekhi yenethiwekhi ixesha elide, ngamanye amaxesha bafuna iifowuni ezingaphantsi nangaphantsi kwaye bafuna okungakumbi ukuba babe nedatha efumanekayo yokusebenzisa i-WhatsApp, i-Facebook okanye enye yezinye izicelo ezininzi ezifuna ukudityaniswa ngokusisigxina kwi-Intanethi.
U-Yoigo ukwazile ukubamba yonke le mfuno yabo bonke abasebenzisi abangakwaziyo ukuphuma kwii-megabytes kwisicwangciso sedatha. Ngapha koko, uyazi imali yayo edumileyo: La SinFín. Eli nqanaba line-GB engenamkhawulo ukuhamba ngeselula yakho kwaye, ukongeza, ineefowuni ezingenamda. ISinFín de Yoigo yenye yeerhafu ezimbalwa ezinikezela ngexabiso eliphakamileyo leegigabytes zokuchitha i- € 35 / ngenyanga. Ukuba ufuna ukuthatha ithuba loku kuncitshiswa kwemali oyibhatala ngenyanga unakho yenze ukusuka apha.
Kwiinyanga ezimbalwa iMásMóvil ihambile ekubeni yinkampani ngaphandle kobukho obuninzi kwintengiso njengesixhobo esisebenzayo sokuhamba ube ngumqhubi wesine waseSpain, Ngokuthengwa kweYoigo.
Inqanaba likaMásMóvil linikwe lahlulwa kubini: Iirhafu esele ziqwalaselwe nguMqhubi kunye namaxabiso onokumisela ukuthanda kwakho. Izicwangciso asinike zona iMásMóvil zimbini: i-8 GB kunye neefowuni ezingenamda ze- € 8,90 kwiinyanga ezintathu zokuqala kunye ne-20GB ngeminxeba engenamda ye- € 14,90.
Iifowuni ezingenamkhawulo zizinto eziqhelekileyo kwimilinganiselo esele yenziwe ye-MásMóvil. Kodwa ukuba ungumntu ogada ngaphezulu kweefowuni ngaphandle kweefowuni eziphathwayo, eyona ndlela unokukhetha kuyo kukumisela umlinganiso wakho. Ngale ndlela, ungongeza elona xabiso liphezulu leegigs (20GB) kwaye ubize iisenti ezi-0 ngomzuzu. Ngoluqwalaselo uya kuba nakho ukugcina i-euro ezimbalwa xa kuthelekiswa naleyo esele inayo iMásMóvil ene-8GB.
Yenza ikhontrakthi naliphi na kula maxabiso ngokunqakraza apha.
orenji Okwangoku ukwibhidi enzima kunye neVodafone yokuba nelungelo lokuba ngumnxibelelanisi weselfowuni wesibini kwintengiso. Ukulungiselela le nto yenze ukuhlaziywa kwawo onke amaxabiso ayo kumaxesha akutshanje, kukhokelela kwikhathalogu yezona zibanzi kwaye zinomdla. Emva kweminyaka esixhenxe asisafumani mali idumileyo yezilwanyana, kodwa sinikezele indlela Yiya kwiirhafu.
Abasebenzisi abafuna kakhulu ngokobungakanani kunye nomgangatho banethamsanqa, kuba amaxabiso eGo aphendula ngqo kula manqaku. Ngale ndlela, iorenji isinika iirhafu Yiya phezulu kwaye uye phezulu, ezo zombini zinedatha engenamda, umahluko wesibonelelo ngasinye ulele kubuchule bokubukela umxholo osasazayo kunye nomgangatho ophezulu (enye kwi-HD kwaye enye ifikelele kwi-4K) kwaye zombini zineminxeba engenamda.
Kodwa amaxabiso anee-gigabytes ezininzi zokuhamba ayisiyobo bonke abaphulaphuli kwaye yinto e-Orange icinge ngayo. Ngesi sizathu sinye, ibonelela ngamanye amaxabiso amathathu aneegig ezimbalwa: Kubalulekile, yiya ngokuguqukayo kunye naBantwana. Nge-Essential, i-Orenji isinika i-7GB kunye neminxeba nge-0 iisenti nge- € 14,95 / ngenyanga. Izinga le-Orenji yokuGuquka ngokuguqukayo lisinika ithuba lokuba ne-16,67GB kunye neefowuni ezingenamda ze- $ 24,95 / ngenyanga. Okokugqibela, ireyithi yaBantwana ine-intanethi ukuya kuthi ga kwi-2GB ye- € 8,95 / ngenyanga kwaye efanelekileyo kwiipilisi zakho okanye kwiilaptops. Ukuba unomdla kwiirhafu ze-Go de Orange, unako baqeshe ukusuka apha ngokulula.
Inkampani ebomvu yenye yezona zinkulu ngaphakathi kommandla waseSpain kwaye kunjalo ikwabonelela ngeerhafu kuphela ezihambayo. Njenge-Orenji okanye iMovistar, iVodafone isinika zonke iintlobo zerhafu, ezineempawu ezahlukeneyo kunye namaxabiso azo zonke iintlobo.
Inkampani ebomvu isondele kuzo zonke iintlobo zabasebenzisi, kwabo batya ii-megabytes ezininzi kunye nemizuzu ukuya kwabo bachitha ngokulambisa enye okanye enye. Ke, sinayo Imfono Mini, engenasiphelo, iMaxi engenasiphelo kunye nenani elingenamda kwabo badla okuninzi ngokweenkcukacha kunye nemizuzu yelizwi.
Kulabo bathetha kakhulu kwaye basebenzise idatha, iVodafone iveza i-GB engenamda kwi-5G, imizuzu engenamda. Zonke ziyi- € 47,99 / ngenyanga. Inqanaba eliphakathi yindlela engenamkhawulo yeMaxi ene-GB engenamkhawulo kwinethiwekhi ye-4G +, imizuzu engenamda. Konke oku nge € 36,99 / ngenyanga. Okokugqibela, ukungasikelwanga mda sisibonelelo esinedatha engenamda kwinethiwekhi ye-4G (isantya esiphezulu sokukhuphela i-2Mbps) kunye nemizuzu engenamkhawulo ye- € 32,99 ngenyanga.
Ukuba unomdla kwiirhafu zeVodafone ezihambayo, ungabaqesha ngaphantsi kwemizuzu emi-3 ukusuka apha.
Movistar Ngamanye amagama, i-Telefónica yakudala yeyona nto ilawula intengiso yemfonomfono, ngenxa yokugubungela kakuhle phantse kuyo nayiphi na ikona lelizwe lethu kunye nenkonzo elungileyo ebonelela abathengi bayo. Ngelishwa amaxabiso abo awekho phantsi njengoko uninzi lwethu luthanda.
Njengokuba abanye abaqhubi besenzile, iMovistar ikwahlengahlengise nesibonelelo sayo senqanaba lokuhamba, nangona kungenjalo njengeOrange. Ngale ndlela, iMovistar isinika amaxabiso amathathu, apho inani elikhulu le-gigabytes limile.
La Ikhontrakthi yeMovistar 2 inqanaba Inokuhlelwa "njengowona mgangatho usisiseko", kuba isinika i-5GB ukuhamba ngeselfowuni kunye nemizuzu engama-50 kwiminxeba ye- € 15 / ngenyanga. Ukuba siyenyuka kwipotifoliyo yeMovistar, inqanaba elilandelayo sisivumelwano seXL esisinika i-15GB kunye nemizuzu engenamda yokutsalela umnxeba kwiindawo zokuhamba kunye nee-mobiles ze- € 24,95 ngenyanga. Amaxabiso okugqibela, ikhontrakthi engapheliyo, ine-GB engenamda, imizuzu kunye neSMS ngexabiso le- € 39,95 / ngenyanga.
Omnye wabaqhubi bokwenyani abangenakuphoswa kolu luhlu ngu Ipepephone oko kusinika awona manqanaba okhuphiswano, kuyo yonke imiba esinokuyifumana kwintengiso. Ngokukodwa, iyasinika Iirhafu ezintathu ezikhuphisana kakhulu ngokubhekisele kwintengiso yonke. Ngale ndlela, sifumana ireyithi yokuqala ebandakanya i-5GB kunye neefowuni ezingenamkhawulo ze- € 7,90 / ngenyanga. Ixabiso eliphakathi lisinika i-10GB kunye nemizuzu engasikelwanga mda nge- € 11,90 ngenyanga.
Okokugqibela, sifumanisa ukuba leliphi elona nqanaba lokufumana inzuzo: i-39GB kunye nemizuzu engenamda yokufowuna nge-19,90 / ngenyanga.
Ewe bahlobo, uAmena ubuyile. Umsebenzisi oluhlaza wayehamba nabaninzi bethu ngelo xesha kwaye, sinokuthi, yinto yakudala xa kufikwa kwifowuni ephathekayo. U-Amena ubuyile ebomini enkosi kwiorenji kwaye amaxabiso akhe ayamangalisa. Lo mqhubi uyafana nohlengahlengiso kwaye babonisa ngokucacileyo ngamaxabiso abo. Izicwangciso zayo ezihambayo zijolise kuhlobo ngalunye lomsebenzisi: inqanaba elinye kwabo basebenzisa iselfowuni yabo kancinane, enye kwabo bathetha kancinane ezinye zimbini kwabo bafuna yonke into. Amanqanaba amane amangalisayo.
Inqanaba lokuqala lelabo abangazisebenzisiyo iifowuni ngaphandle kwekhaya. U-Amena ubacingele kwaye ubanikezela nge-4GB, ubiza iisenti ezi-0 ngomzuzu kunye ne-SMS engenamda nge- € 6,95 / ngenyanga. Kodwa ukuba uthetha kancinci kwifowuni yakho ephathekayo, uya kuba nomdla kwinqanaba nge-10GB, imizuzu engasikelwanga mda kunye neSMS engenamda nge- € 9,95 ngenyanga.
Inkampani eluhlaza ikunika isicwangciso esiphathwayo esine-25GB, iifowuni ezingenamda kunye neSMS ye- € 19,95 / ngenyanga. Kodwa ukuba i-10GB ayonelanga kuwe, isicwangciso samva nje siya kuba nomdla ngakumbi kuwe. Ixabiso lokugqibela likunika i-30GB, iifowuni ezingenamda kunye neSMS ye- € 24,95 / ngenyanga.
Siyazi ukuba kunzima kakhulu ukukhetha ireyithi ye-Amena, kuba ilungile ngenene. Ukuba awusithathi isigqibo, kule khonkco unokufumana ulwazi ngakumbi.
I-orenji yaseSimo ayisiyongxaki kwaye ikwayinkampani yeqela leorenji. Nangona kunjalo, uSimo unento enqabileyo nenqabileyo: ungazenzela owakho umyinge. Ungaqwalasela isicwangciso sakho ngedatha engaphezulu okanye encinci kunye nemizuzu engaphezulu okanye engaphantsi yelizwi. Ingaba uguna ntoni.
Phambi kokuchaza ukuba ubumbeko lomlinganiso olwenzelwe wena lusebenza njani, ndifuna ukukuxelela malunga namaxabiso asele ekubonelelekile ngawo uSimo. Inkampani isinika iirhafu ezine esinokuzifumana. Sinamaxabiso ngaphandle kwesabelo, oko kukuthi, 0 euro. Sinezinga elincinci elibandakanya imizuzu engama-20 yeminxeba kunye ne-100MB ye- € 2 ngenyanga. Ixabiso elifanelekileyo leWhatsApp enemizuzu engama-50 yeminxeba kunye ne-100MB ye- € 3,5 / ngenyanga. Kwaye ukucwangciswa kokugqibela kwabo bathethayo kunye nokusefa kakhulu. Oku kusinika imizuzu eyi-100 kunye ne-2GB nge- € 6,5 ngenyanga.
Ukuba akukho namnye kula maxabiso angentla anokukuqinisekisa, khumbula ukuba unokwenza eyakho ngendlela elula kakhulu. Into yokuqala ekufuneka uyikhethileyo yidatha oza kuhamba nayo neselfowuni yakho. Awunakho ukukhetha idatha oza kukhangela kuyo, kodwa ubuninzi be-40GB. Emva kwexesha, kuya kufuneka ukhethe inani lemizuzu oza kuyitsalela umnxeba, ukusuka kwimizuzu eli-0 ukuya kwiminxeba engenamda. Ingcebiso yethu, kule meko, icacile: yenza inqanaba lakho. Akukho nto ingcono kunokuba unakho ukukhetha into ofuna ukuyisebenzisa ngokweenkcukacha kunye nemizuzu yelizwi. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukubona amanye amathuba anikwa nguSimo, ngena apha.
ULowi yenye yeenkampani zeefowuni eziphathwayo ezixabiseke kakhulu ngabasebenzisi, enkosi kumaxabiso asoqoqosho kakhulu kunye nethuba lokudala ireyithi ngokupheleleyo ngendlela esiyithandayo. Unako kwaye uqwalasele ireyithi yakho ukusuka kwi-8GB ukuya kwi-30GB yedatha kwiselfowuni yakho kwaye, ngokwemizuzu yelizwi, bonke baneminxeba engenamda.
Ukuba kuya kufuneka sihlale nelinye lamaxabiso abo, ngokungathandabuzekiyo liqondo lakho ngesiQinisekiso sakho nge-8GB ye- € 7,95 ngenyanga. Ixabiso eliphezulu lokukhuphisana kwaye ngokungenakulinganiswa. Ungayibona yonke le nto inokwenzeka Izinga lokulinganisa kunye neempawu ezisuka apha.
Leliphi inqanaba onalo ngoku kwaye ungalitshintsha eliphi ukuba unakho? Njengoko sele ubonile, amathuba anokuphela kwaye yonke into ixhomekeke kuwe. Sukuhlala kwaye uhlale ubukele oku kungena kuba siza kuhlaziya rhoqo ngenyanga. Kwaye ukuba awulifumananga iqondo lakho elifanelekileyo apha, unokuhlala usebenzisa i Roams uthelekisa ngomnxeba ukufumana olona khetho lukuvumela ukuba ugcine.